Talooyin si dhakhso leh loogu beero timaha - Afrikhepri Fondation
Talooyin ku saabsan timaha si dhakhso leh u kora
EMiyaad u dulqaadanaysaa inaad muddo dheer sugto inaad timahaaga korto? sidaa darteed waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn karto si aad dhakhso ugu gaadho koritaanka timaha. Marka ugu horeysa waxa ugu muhiimsan waa inaad timahaaga daryeesho.
Halkan waxaa ku qoran talooyin aad sameyn kartid:
Cun cunno dheellitiran
fiirso waxa aad cunto. Ka dib, Kobaca timaha waxay kuxirantahay nooca cuntada aad raacayso. Maskaxda ku hay in haddii aad cuntid cunnooyin caafimaad leh, ay ka dhigan tahay in aad sidoo kale ku quudinayso timahaaga timaha waxyaabaha ay u baahan yihiin. Haddii aad cuntid cunto aan caafimaad qabin, waa inay sabab u noqotaa timahaaga khafiifka ah.
Si kale haddii loo dhigo, kor u qaad qaadashada khudradda iyo miraha maxaa yeelay waxay leeyihiin xaddiyo badan oo antioxidant ah oo kicin kara koritaanka timahaaga Marka timahaagu khafiifaan oo aan caafimaad qabin, waxaad u baahan doontaa cunnooyin hodan ah borotiin cunnadaada maalin kasta. Sababtoo ah borotiinnada ayaa muhiimad ahaan u horseedi kara koritaanka timaha, iyo inay ilaashadaan iftiintooda, jilicsanaantooda iyo quruxdooda.
Cun cunnooyin ay ku jiraan acids dufan leh omega-3
Omega-3 asiidh dufan ayaa leh hanti anti-bararka, sidaas darteed kalluunka qani ku ah omega-3 ayaa kaa caawin doona inaad ka takhalusto dhuumahaas ku jira maqaarkaaga.
U isticmaal biyo sidii timahaaga oo loo daaweeyo
Cabitaanka dhowr koob oo biyo ah waa tilmaamo aad u wax ku ool u leh koritaanka timahaaga dhakhso, waxay sidoo kale kaa caawin doontaa madaxaaga inuu caafimaad qabo oo dhumuc badannaado.
Ku quudi timahaaga majones
Cunto kale oo aad u isticmaali karto inaad timahaaga ka dhigto mid dheer oo caafimaad leh, oo dhumuc weyn oo kaa caawin doona inuu si dhakhso leh u koro - waa daaweynta leh majones taas oo had iyo jeer lagu kalsoonaan karo maxaa yeelay waxay hodan ku tahay borotiinka saliidda kaas oo Timahaaga uga tag si quruxsan, oo ka dhig mid dhalaalaya oo jilicsan, oo weliba kobciya madaxa.
Timaha Koritaanka Timaha, Timaha Timaha iyo Daaweynta Timaha Timaha, Xajmiga Timaha, Waxay Dhiirrigeliyaan Kororka Timaha Timaha, Midda Wanaagsan iyo Dhaqso.
1 cusub oo ka yimid € 15,99
Iibso 15,99 €
laga bilaabo Sebtember 21, 2020 3:27
AT NATIIJ & SAFE】 Timaha Koritaanka Timaha waa badeecad dabiici ah oo tayo sare leh. Waxay siisaa saameyn dabiici ah oo nabdoon oo lagu beero caafimaad, timo xoog leh.
OS LACAGAHA KA HOR LACAGTA】 Timaha oo yaraada iyo khafiifinta timaha Nashaadku waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa timo luminta iyadoo la siinayo nafaqada timaha iyadoo la xoojinayo iska caabbinta kicinta dibedda si timaha looga dhigo mid qaro iyo dhalaalaya.
EF NATIIJADA GUUD】 Nuxurka koritaanka timaha si wax ku ool ah kor ugu qaadida koritaanka timaha, waxay timaha ka dhigtaa mid caafimaad leh oo firfircoon kana saara timaha saliidda leh.
SE Baaritaanka HAIR】 Waxay kobcisaa timo caafimaad qabta, timo xoog badan oo caafimaad qabta. Adigoo adeegsanaya taranka biotin quruxda badan, waxaad ugu dambeyntii naftaada siin kartaa timaha cufan, dhaldhalaalaha ah ee aad had iyo jeer dooneysay.
PA Dib-u-habeynta HAIR】 Waxay ku habboon tahay timo khafiif ah illaa dhexdhexaad ah, muddo dheer si loo hagaajiyo timaha, loo hagaajiyo xaaladda timo luminta, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo wareegga 3 illaa 6 bilood.
Furaha Sirta - Daniel Sévigny
Samee Hogaamintaada - John Maxwell (Audio)
Abyssinia, boqortooyadii reer Negus